Maalinta: Abriil 13, 2019
Warshadaha Caleemaha ee THY Teknik
Duulista TUDEP Duulista iyo Warshadaha Difaaca Guryaha ayaa bilaabay weerar iyada oo ujeedadu tahay helida fiilooyin tayo sare leh iyo hagitaano loo adeegsado warshadaha Duulista iyo Difaaca iyo xawaaraha la xiriira iyo qalabka kale. [More ...]
Çerkezköy–Silivri inta udhaxeysa wadada tareenka xamuulka xamuulka Markii la arkay xarkaha jabay, makaanikku si yar ayuu u joojiyey tareenka, oo mid ka mid ah gaadhigii ciidda ku rarnaa ayaa ku dhacay. Marka loo eego macluumaadka la helay, saacadaha 12 ee ka horreeya subaxnimada Jimcaha ee Abriil [More ...]
Inci GS Yuasa, 3 ee Manisa. Waxa uu furay warshadeeda
warshadaha ee sahayda baabuurta ee Turkey Inci Holding shirkadaha aasaasay dunida la batari Sudee Yuasa hoosaad Rafaa Japanese ah Sudee Yuasa Pearl, taasoo ahayd sannaddii afraad ee iskaashi la maalgelin ah oo dhan $ 120 million in ay ku shaqeeyaan oo ay warshad saddexaad ee Manisa [More ...]
Tabobar iskaashiga bulshada iyo kobcinta tareenka ayaa ka dhoofay Istanbul Sirkeci Station bishii Abriil iyada oo ujeedadu tahay kor u qaadista wacyiga ku saabsan nooca iskaashiga bulshada, taageerida, horumarinta iyo ballaarinta iskaashatooyinka bulshada. [More ...]
Borotokool iskaashi istiraatiiji ah ayaa la kala saxiixday Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa (BTSO) iyo Adana Rugta Wershadaha. Xubin ka tirsan gudiga TOBB iyo gudoomiyaha golaha warshadaha Adana Zeki Kıvanç ayaa shaqadiisa ka bilaabay ganacsiga iyo warshadaha. [More ...]
Furitaanka Güneş Solar Power Plant kurulan oo ay dhistay hay'adda Tareenka Waddooyinka ee Turkiga (TCDD) ee Selçuk, İzmir, waxaa maanta qabtay Ali İhsan Uygun, Maareeyaha Guud ee TCDD. Ku habboon, TCDD qiyaastii ah qiyaastii 16.000 m², Sun [More ...]
DE 10000 Xirfadlaha Awoodda Korontada Qaranka ee Eurasia Rail 2019 Segilendi
Qandaraasluhu, Turkey kaliya oo 3 ee dunida ugu weyn. waxaa lagu muujiyey Eurasia Rail 2019, carwada carwada tareenka iyo nidaamyada xadiidka fudud. Nidaamka kulanka caalamiga ah ee go'aannada iyo ka wada hadalka horumarkii ugu dambeeyay ee qaybta tareenka [More ...]
'Hufnaanta Tamarta ee Warshadaha' Abaalmarinta Ugu Horeeya ee TÜLOMSAŞ
kuwaas oo si firfircoon uga Eskisehir, Turkey tareenka iyo Engine Industry Inc. (TÜLOMSAŞ), Tamarta iyo Khayraadka Dabiiciga ah abaabulan ee sanadkan Wasaaradda xnumx'uncu "Karti Energy ee Warshadaha" qaatay abaalmarinta ugu horeysay ee tartanka mashruuca. Horumarka farsamada [More ...]
Maanta taariikhda 13 Abril 1896 Baron Hirsch wuxuu u dhintey dhiigbaxa maskaxda ee Hungary. Shaqsiyaad caan ah oo badan oo reer Yurub ah ayaa ka qeybgalay aaska Paris. Hirsch wuxuu kasbaday 800 milyan oo faran oo ka mid ah inta badan wadooyinka tareenka ee Rumeli. [More ...]